Imizi eyishumi ebaluleke kakhulu eFrance: Inani labantu kanye namagugu | Izindaba Zokuhamba
Imizi eyishumi ebaluleke kakhulu eFrance
Luis Martinez | 19/07/2021 09:26 | Amadolobha, EFrance
Ukukhuluma ngamadolobha ayishumi abaluleke kakhulu eFrance kusho ukukhuluma ngalabo abanenani elikhulu kakhulu labantu. Kepha futhi kwalabo abanakho inani lomlando nelikhulu kakhulu ngisho nalabo abathola inani elikhulu lezivakashi.
Ngoba ukubaluleka kwedolobha akunqunywa kuphela ngosayizi noma ngamandla alo kwezomnotho. Kunamadolobha okuthi, noma emancane, abaluleke kakhulu emlandweni wezwe lasendulo laseGallic futhi anezimangaliso zokwakha, njalo ngonyaka, eziheha izinkulungwane zezivakashi. Kepha, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokukhombisa amadolobha ayishumi abaluleke kakhulu eFrance.
1 Imizi eyishumi ebaluleke kakhulu eFrance ngomlando nangabantu
1.1 IParis, elinye lamagugu aseYurophu
1.2 IMarseille, amandla ezomnotho
1.3 ILyon, isithathu lamadolobha ayishumi abaluleke kakhulu eFrance
1.4 I-Toulouse, inhlokodolobha yase-Occitania
1.5 Kuhle, ubuhle beCôte d'Azur
1.6 INantes, idolobha lakubo laseJules Verne
1.7 IStrasbourg, inhlokodolobha yaseYurophu
1.8 IMontpellier, idolobha okwakungelomqhele wase-Aragon
1.9 IBordeaux, izwe lamawayini
1.10 Lille, «Idolobha Lobuciko Nomlando»
Imizi eyishumi ebaluleke kakhulu eFrance ngomlando nangabantu
Uhambo lwethu lwamadolobha ayishumi athakazelisa kakhulu eFrance luzoqala, kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, ngokungenakuqhathaniswa EParis, ezothando «Idolobha Lothando». Kamuva, izoqhubeka ngokusebenzisa ezinye izindawo ezisemaphethelweni ezifana nabantu abaningi Marseille o Kuhle, inhlokodolobha yeCôte d'Azur.
IParis, elinye lamagugu aseYurophu
Sizodinga, hhayi eyodwa, kepha izindatshana eziningana ukukutshela ngakho konke ongakuthola eParis, ngakho-ke ngizokushiya lapha eminye imininingwane ngedolobha. Kepha, njengoba wazi, uphawu lwayo olukhulu yi I-eiffel tower, eyakhelwe i-Universal Exposition ka-1889 futhi etholakala ezingadini ezinhle ze- Inkambu ye-Mars.
Akusali emuva ngokubaluleka I-Notre Dame Cathedral noma iNuestra Señora, isimangaliso esenziwe ngendlela yamaGothi esakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Futhi, eduze kwazo zombili izikhumbuzo, okuhle ILouvre Museum noma isakhiwo esihle se- Okungavumelekile, lapho kungcwatshwa khona uNapoleon Bonaparte.
Ama-must-see eParis nawo angomakhelwane be-bohemian Montmartre, iSonto leNhliziyo Engcwele, iRoyal Basilica yaseSaint-Denis kanye neChamps-Elysées. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa ukuhamba osebeni lweSeine futhi ujabulele ukudla kwaseFrance ezindaweni zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela ezinhle.
IMarseille, amandla ezomnotho
Kutholakala ogwini lweMedithera futhi selivele liguqulwe laba yichweba lezentengiselwano ngabaseFenike, akusilo kuphela idolobha lesibili elinabantu abaningi eFrance, kodwa futhi yilona elinikeze negama lengoma yezinguquko enesihloko esithi Imarsellesa, iculo lesizwe lamanje.
Enhlokodolobha yomnyango we AmaBouches aseRhône ungavakashela amahle isonto lombhishobhi laseSanta María la Mayor, ihlukile kulo lonke elaseFrance ngesitayela sayo saseRoma-Byzantine. Futhi, eduze kwakhe, ungayeki ukubona i- USanta Victor Abbey, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX futhi okungenzeka ukuthi iyindawo yokukhonza yamaKristu endala kunazo zonke ezweni laseGallic.
Kepha okuphawuleka kakhulu eMarseille yilawa bastides. Lawa ngamakhaya amahle abesebenza njengendawo yokuhlala yesibili yonxiwankulu bakuleli dolobha. Phakathi kwabo, iChâteau de la Buzine ivelele ngobuhle bayo, kepha namuhla kusekhona abangaba amakhulu amabili namashumi amahlanu abasakazeke emaphandleni aseMarseille.
Ekugcineni, kufayela le- isiqhingi sase-If ukuqiniswa kwekhulu le-XNUMX elidume ngokuba ijele lapho i- Ukubalwa kweMonte Cristo, umlingiswa odumile ka Alexander Dumas.
ILyon, isithathu lamadolobha ayishumi abaluleke kakhulu eFrance
ILyon: ISonto LaseSt
Ngabantu abacishe babe yingxenye yesigidi, iLyon, inhlokodolobha yangaphambili ye IGalile, idolobha lesithathu elibaluleke kunazo zonke eFrance. Idume ngokukhiqizwa kosilika, kepha ngaphezu kwakho konke ngenxa yenkimbinkimbi yayo enkulu. Eqinisweni, iningi laso lifakwe ohlwini Amagugu Emhlaba.
Sikukwazisa ukuthi uvakashele i- I-Vieux Lyon, Igama elinikezwe indawo yakhona yangenkathi ephakathi neyokuvuselela. Kuyo uzothola i- st john's cathedral, ngefasitela layo elikhulu elingaphambili le-rose elihlanganisa iRomanesque neGothic. Kepha nesonto laseSan Jorge, iPink Tower, izakhiwo zeStock Exchange nehhotela iBullioud noma iPlaza de la Trinidad eyingqayizivele.
Kodwa-ke, mhlawumbe okujwayelekile kakhulu eLyon yilawa ama-traboules, okuyizindawo eziphakathi nendawo phakathi kwamagceke ezindlu. Idolobha linabantu abangaba ngamakhulu amahlanu, ikakhulukazi edolobheni lakudala. Ekugcineni, egqumeni laseFourvière uzothola indawo yaseshashalazini yamaRoma ne-odeon, kanye nokukhanga okukhulu I-Notre-Dame de Fourvière basilica.
I-Toulouse, inhlokodolobha yase-Occitania
IToulouse City Hall
Kuyaziwa nge "I-Pink City" Ngoba lo mbala ubaluleke kakhulu ezakhiweni zawo zomlando zezitini eziveziwe, iToulouse inokuningi ongakunika kona.
Phakathi kwezikhumbuzo zalo zenkolo, sincoma ukuthi uvakashele i- Isonto lombhishobhi iSanta Étienne, ngesitayela sayo se-gothic eseningizimu, futhi okumangazayo isonto laseSan Sernín, okungenye yamasonto amakhulu kakhulu aseRoma eYurophu. Kepha futhi Isigodlo sabakwaJacobins futhi i isonto laseDorada laseToulouse, okuhlala kulo okuthiwa yi-Black Virgin.
Ngokuqondene nezakhiwo zomphakathi, eziningi zazo imibhoshongo ye-gothic njengaleyo kaBoyssonson, uBernuy, uSerta noma u-Olmières. Futhi ngokufanayo yabo izembozo zokuvuselela. Isibonelo, lezo zeHotel Molinier, Assézat noma iNyuvesi.
Kamuva isakhiwo esihlaba umxhwele se- ICapitol, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX futhi okumanje okuyisihlalo soMkhandlu Wedolobha; okudala Isibhedlela de la Grave, ne-dome yayo ebabazekayo kanye ne canal du midi, umsebenzi ongajwayelekile wobunjiniyela oyi-World Heritage Site.
Kuhle, ubuhle beCôte d'Azur
Entle: castle of the English
IGreat Nice iphakathi kwamadolobha ayishumi aphezulu eFrance ngezizathu eziningi. Okokuqala, ngenani labakhileyo, ngoba icishe ifinyelele ezinkulungwaneni ezingamakhulu amathathu namashumi ayisihlanu. Kepha, ngaphezu kwakho konke, ngokuba sendaweni yabavakashi ye- IBlue Coast futhi unamakhilomitha ayisishiyagalombili amabhishi amahle. Phakathi kwabo sizokhuluma nge-Opera House, Le Sporting noma iCastel.
Futhi siphakamisa ukuthi kube nezikhumbuzo ezifana Inqaba yaseMonte Alban futhi i Izigodlo zamaDukes of Savoy, iProvince noma iSenate, ngaphandle kokukhohlwa okudumile ukuhamba kwesingisi. Kufanele zengezwe kusincomo sethu, izakhiwo ezakhiwe ngesikhathi se- I-Belle Epoque. Isibonelo, izinqaba del Inglés, Valrose, Santa Helena neGairaut noma iHotel Excelsior.
INantes, idolobha lakubo laseJules Verne
INantes: Inqaba Yezikhulu ZaseBrittany
Manje siya entshonalanga yeFrance ukubona idolobhana lakulo mbhali Jules Verne. Leli dolobha laseBreton linezikhumbuzo eziningi. Okumangalisayo isigodlo sangesikhathi esidlule samaDuke aseBrittany futhi i ICathhedral kaSanta Peter noSanta Paul, ukuhlanganiswa kwezitayela ezahlukene zokwakha.
Futhi, eduze kwabo, okuyigugu isonto lasanta nicholas, Neo-Gothic futhi efakwe ohlwini njengeSikhumbuzo Somlando saseFrance; umnyango waseGallo-Roman weSan Pedro; izakhiwo zeCity Hall neStock Exchange noma iGraslin theatre. Zonke ngaphandle kokukhohlwa, ngokunembile, Umnyuziyamu waseJules VerneUkuvakashelwa okubalulekile kubalandeli bombhali ikakhulukazi nabathandi bezincwadi jikelele.
IStrasbourg, inhlokodolobha yaseYurophu
IStrasbourg: IFrance Encane
Ebhekwa njengenhloko-dolobha yaseYurophu kanye neBrussels neLuxembourg, leli dolobha lase-Alsatian elisemngceleni waseJalimane isikhungo esinomlando samemezela iNdawo yamaGugu Omhlaba.
Lokhu kuhlala ocingweni Isiqhingi Esikhulu SaseStrasbourg, lapho kufanele uvakashele khona okumangalisayo I-Notre Dame Cathedral, IsiGothic ngesitayela futhi sithathwa njengesakhiwo senkolo eside kunazo zonke emhlabeni. Kufanele futhi ubone amasonto aseSanto Tomás, eSan Pedro el Viejo naseSan Esteban.
Kanye nalezi zikhumbuzo, uzothola eStrasbourg ezinye ezifana ne- Umakhelwane omncane waseFrance, nemigwaqo yalo nezakhiwo zangeNkathi Ephakathi, i Isigodlo saseRohan noma izindlu zaseKammerzell noma zeCustoms. Ekugcineni, ungakhohlwa ukudlula kufayela le- Isikwele seKleber, maphakathi nendawo yezentengiselwano, nokubona iMuseum of Fine Arts, neqoqo layo elibalulekile lemidwebo.
IMontpellier, idolobha okwakungelomqhele wase-Aragon
IMontpellier: ISonto LaseSt
Yidolobha elincane uma liqhathaniswa neningi langaphambilini, ngoba lasungulwa ngekhulu lesi-XNUMX. Kodwa-ke, ayishodi ezindaweni ezithokozisayo okufanele ukuvakashelwa kwakho.
Owokuqala yi- ISanhedro Cathedral, enompheme wayo oyingqayizivele ozimele izinsika ezimbili ezima mahhala nombhede wayo. Futhi, ngaphezu kwalokho, sikweluleka ukuthi ubone i- umsele wamanzi waseSan Clemente, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX, isango lakwaPeyrou, ngesitayela seDoric, kanye nesakhiwo esihle seFakhalthi Yezokwelapha lapho kwakufunda khona abalingiswa abanjengoNostradamus, Rabelais noRamón Llul.
Ngokwengxenye yayo, i UJardin des Plantes Kuyinsimu yezitshalo endala kunazo zonke eFrance, ngoba yadalwa ngo-1523 kanti iTower of Pines isukela ngekhulu le-XNUMX futhi isabela kwisitayela sikaNorman Gothic.
IBordeaux, izwe lamawayini
IBordeaux Stock Exchange Square
Inhlokodolobha yesifunda seNew Aquitaine, iBordeaux yabizwa "U-sleeping Beauty" ngokuba sesiphile isikhathi eside ngaphandle kokuqhakambisa izikhumbuzo zaso. Kodwa-ke, sekuyiminyaka embalwa manje ivuse ezokuvakasha. Eqinisweni, indawo yedolobha eyaziwa njenge Itheku Lenyanga Kumenyezelwe njengendawo eyiGugu Lomhlaba.
En "Iparele le-Aquitaine", njengoba kwaziwa futhi, kufanele uvakashele i- Isonto likaSt. Andrew, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX, amasango ayo asendulo anjengeCailhau nobukekayo isonto laseSaint-Michel, ngesitayela se-Gothic esivuthayo nangombhoshongo ocijile onensimbi ngaphezu kwamamitha ayikhulu ukuphakama.
Kepha futhi kufanele ubone ifayela le- isonto laseSan Severino, umxhwele abbey waseSanta Cruz, iGrand Theatre ebabazekayo kanye ne Indawo yokulala, Zonke zakhiwe ngesitayela se-art deco. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa i- Isikwele semakethe yamasheya, iqoqo elihle lokwakha lezakhiwo zakudala.
Lille, «Idolobha Lobuciko Nomlando»
Ukuqedela ukuvakasha kwethu emadolobheni ayishumi abaluleke kakhulu eFrance, sizoma eLille, ebizwa ngokuthi "iDolobha Lobuciko Nomlando" njengoba kwakuyinhloko-dolobha yaseYurophu Yamasiko ngonyaka we-2004.
Kusondele kakhulu emngceleni waseBelgium, eLille enkulu yayo inqaba yeVauban, okwamanje iguqulwe yaba yipaki. Kufanele futhi ubone ukubabazeka kwayo Isonto lombhishobhi i-Notre Dame de la Treille, isitayela se-neo-gothic futhi sakhiwa ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Njengaseduze Isonto iSt. Maurice, uphethe isigaba se-Historical Monument of France.
Kepha, okuhle kakhulu uma kunokwenzeka yi Isigodlo Sezobuciko, eyakhiwe ngoku-oda kukaNapoleon futhi egcina iqoqo elihle lemidwebo nezithombe ezibaziwe. Futhi singakutshela okufanayo ngokwakhiwa kwe- opera. Kepha uphawu olukhulu lukaLille Charles de Gaulle, enomnyuziyamu efakwe lapho azalelwa khona.
Ekuphetheni, sikukhombisile amadolobha ayishumi abaluleke kakhulu eFrance. Kodwa-ke, abanye abaningi basele emapayipini. Isibonelo, izivakashi I-Cannes, esivele sinikela kukho okuthunyelwe kubhulogi yethu, yangenkathi ephakathi UCarcassonne, umlando Avignon noma abantu abaningi I-Aix en Provence. Awufuni ukubazi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Imizi eyishumi ebaluleke kakhulu eFrance
Izintaba eziyi-10 ezinde kunazo zonke emhlabeni